Rooble raiisal wasaare Somaliyeed maaha ee mid jufo: Barkhad Batuun - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Rooble raiisal wasaare Somaliyeed maaha ee mid jufo: Barkhad Batuun
Afhayeenka xisbiga Wadani ee maamulka Somalilaan ayaa laba arimood is hoos geliyay. Waa mid uu ku weerarayo Muuse Biixi si dadban dhinacna kuwa ka duubayo iyo Muuse Biixi ka raali-gelinayo mar uu ka hadlay shacabkii horejooge Muuse Biixi ku bililiqaystey Laascaanood.
”Barkhad Batuun oo beesha dhexe u codaysay ayaa si guud uga hadlay sida Muuse Biixi u bililiqaystey shacabkii reer Koofur galbeed wuxuuna ka gaabsaday inuu cambaareeyo, wuxuuna ku celceliyay waan taageersanahay amniga ayuu yiri Xuseen Warsame.
Wuxuuse aad u jeclaaday inuu gunti giijiye Rooble runta u sheego. Rooble oo Somalidu ku qasaartey ayaa noqday horgale weyn oo markii London loo kaxeeyay ku sigtey inuu ka noqdo dacwada taala maxkamada.
”Markii uu ogaadey in la eryi doono ayuu ku dhici waayay wayna isla eegeen inuu ka noqon karo iyo in kale ayuu raaciyay Xuseen Warsame soo noqodkiisiina wuxuu toos ugu tagay Uhuru oo bilaabay inuu guntiga u giijiyo.
Barkhad Batuun oo foolxumadaa ka duulaya ayaa dhulka la galay isagoo runtii ku raaligelinaya Muuse Biixi.